OTU ESI EMEPỤTA AKAỤNTỤ NKE ABỤỌ VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Ịmepụta akaụntụ abụọ VKontakte
Otu ISO bụ ihe oyiyi ikpu anya nke e dekọrọ na faịlụ. Ọ bụ otu ụdị nke CD. Nsogbu bụ na Windows 7 adịghị enye ngwaọrụ pụrụ iche maka ihe ndị na-agba ọsọ dị otú a. Otú ọ dị, e nwere ụzọ dị iche iche ị nwere ike igwu ọdịnaya ISO n'ime os.
Hụkwa: Otu esi emepụta ihe oyiyi ISO nke Windows 7
ISO na Windows 7 nwere ike na-agba ọsọ naanị site na iji ngwanrọ nke atọ. Ndị a bụ ngwa pụrụ iche maka nhazi oyiyi. O nwekwara ike ile ọdịnaya nke ISO ahụ site n'enyemaka nke ụfọdụ ndị na-edebe ihe ochie. Ọzọkwa anyị ga-atụle nkọwa zuru ezu banyere ụzọ dị iche iche nke edozi nsogbu ahụ.
Usoro 1: Mmemme maka ịrụ ọrụ na ihe oyiyi
Tụlee ihe algorithm nke omume na-eji software nke atọ maka nhazi oyiyi. Otu n'ime mmemme kachasị ewu ewu maka ịmepụta nsogbu a jụrụ na nke a bụ ngwa, nke a na-akpọ UltraISO.
Gbaa usoro ihe omume ma pịa akara ngosi. "Ugwu na ịkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ" na n'elu panel ya.
Na-esote, iji họrọ ihe dị iche na ndọtị ISO, pịa bọtịnụ ellipsis n'ihu ubi "Njikwa Njikwa".
A ga-emeghe windo nhọrọ faịlụ. Gaa na nchịkọta ọnọdụ ebe ISO, họrọ ihe a ma pịa "Meghee".
Ọzọ, pịa bọtịnụ "Ugwu".
Wee pịa bọtịnụ ahụ "Mmalite" gaa n'aka nri nke ubi "Egwuregwu Kwadoro".
Mgbe nke a gasịrị, a ga-arụ ọrụ faịlụ ahụ. Dabere na ọdịnaya ya, ihe oyiyi ahụ ga-emeghe "Explorer", ọkpụkpọ multimedia (ma ọ bụ usoro ihe omume ọzọ) ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ nwere faịlụ nwere ike iweghachị, a ga-arụ ọrụ a.
Ihe omumu: Otu esi eji UltraISO
Usoro 2: Archivers
Ị nwere ike mepee ma lee ọdịnaya nke ISO, yana ịmepụta faịlụ ọ bụla na ya, ị nwekwara ike iji nchekwa ebe niile. Nke a dị mma n'ihi na, n'adịghị ka ngwanrọ maka ịrụ ọrụ na ihe oyiyi, enwere ọtụtụ mmemme free na ụdị ngwa a. Anyị na-atụle usoro maka ihe atụ nke Archiver 7-Zip.
Na-agba ọsọ 7-Zip ma jiri onye njikwa faịlụ rụọ ọrụ iji gaa na ndekọ ndekọ ISO. Iji lee ọdịnaya nke ihe oyiyi, pịa ya ozugbo.
A ga-egosipụta listi niile faịlụ na nchekwa dị na ISO.
Ọ bụrụ na ịchọrọ wepụ ọdịnaya nke onyinyo ahụ iji kpọọ ma ọ bụ rụọ nhazi ọzọ, ịkwesịrị ịlaghachi nzọụkwụ. Pịa bọtịnụ dị n'ụdị nchekwa dị n'aka ekpe nke ụlọ ntanetị.
Họrọ oyiyi ma pịa bọtịnụ ahụ. "Wepu" na toolbar.
Mpido windo apughi imeghe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọpụ ọdịnaya nke onyinyo ahụ na nchekwa dị ugbu a, ma na onye ọzọ, pịa bọtịnụ gaa n'aka nri nke ubi "Kpochapu na ...".
Na mpio nke meghere, gaa ndekọ nke nwere ndekọ nke ịchọrọ iziga ọdịnaya nke ISO. Họrọ ya wee pịa "OK".
Mgbe ụzọ na nchekwa ahọrọ weere na ubi "Kpochapu na ..." na windo ntọala, pịa "OK".
Usoro nke wepu faịlụ na nchekwa a kapịrị ọnụ ga-arụ.
Ugbu a ị nwere ike mepee ọkọlọtọ ahụ "Windows Explorer" ma gaa na ndekọ ahụ e kwuru kpọmkwem mgbe ọ na-adịghị arụ ọrụ n'ime 7-Zip. A ga-enwe faịlụ niile e si na foto ahụ pụta. Dabere na ebumnuche nke ihe ndị a, ị nwere ike ịlele, kpọọ ma ọ bụ mee ndị ọzọ na ha.
Ihe omumu: Otu esi ewepu faịlụ ISO
Ọ bụ ezie na ngwá ọrụ ọkọlọtọ nke Windows 7 adịghị ekwe ka ị mepee ihe oyiyi ISO ma ọ bụ mepụta ọdịnaya ya, n'ebe ahụ ị nwere ike ọ dịkarịa ala mee nke a site n'enyemaka nke mmemme ndị ọzọ. Nke mbụ, ị ga-enyere ndị ọkachamara aka iji rụọ ọrụ na ihe oyiyi. Ma ọrụ ahụ nwekwara ike idozi ya site n'enyemaka nke ndị na-edebe ihe nchekwa.